Tirada Tahriibayaasha ee sanadkaan ku dhimatay Badda Mediterranean Sea oo la shaaciyay. - Latest News Updates
Tirada Tahriibayaasha ee sanadkaan ku dhimatay Badda Mediterranean Sea oo la shaaciyay.
Warbixin shalay oo Khamiis ahayd uu soo saaray Guddiga gargaarka Qaxootiga Dalka Spain ee CEAR loo soo gaabiyo ayaa lagu sheegay in tan iyo markii ay billoowdeen safarrada sharci darrada ah Sanadkan oo keliya ay Badda dhexe (Mediterranean Sea) ku dhinteen 2,241, Qof oo tahriibayaal ah.
Guddiga CEAR ayaa sheegay in tirada Dadka musaafuriinta aan sharciga ahayn ee ku dhintay Badda dhexe ee Mediterranean-ka ay aad u sareeyeen Sanadka 2018 , walow ay ka sii badan yihiin intii ku Naf weyday Sanadihii hore.
Dhanka kale Guddiga ayaa sheegay in qul-qulka tahriibta aan lagu xallin Karin wada hadallada Dowladaha ay ka yeeshaan, loona baahn yahay si kale loo wajaho, wuxuuna Gudigu kula taliyay madaxda Yurub in ay joojiyaan caqabadaha ka dhanka ah Qaxootiga.